China Wepụ Fuuz Cutout 11kv (RW-12) Nrụpụta na orylọ Ọrụ | Ike Wangyuang
Fipout fuuz bụ ụdị ịchụpụ na ọrụ ya bụ iji chebe ndị nkesa na ntanetị nkesa ime obodo. Ọ bakwara uru karịsịa maka ọdụ ụgbọ mmiri na-enweghị ike ịnweta ebe njirimara nke fusing bara uru.
.Dị Gosiri Voltaji (kv) Gosiri Ugbu A (A) Na Na Na Na (A) Bilie Volta Bil (Bil) Ike-ugboro Iguzogide Volta Leakage Anya (MM) Akụkụ (CM)
The ụdị nke cuout fuuz:
Dropdị dobe ahụ bụ ihe mgbanaka mkpụmkpụ nke mkpụmkpụ kachasị nke a na-ejikarị eme ihe maka alaka alaka nke nkesa 10kV na nkesa nkesa. O nwere njirimara nke akụ na ụba, ịrụ ọrụ dị mma, ime mgbanwe siri ike na gburugburu ebe obibi na ihe ndị ọzọ. Ọ na ọtụtụ-eji na isi n'akụkụ nke 10kV nkesa edoghi na nkesa nkesa maka nchebe na akụrụngwa ịmafe na ọnwụ ọrụ.
Ọ arụnyere na alaka alaka nke 10kV nkesa akara, nke nwere ike belata akporo ike ọdịda. N'ihi oghere nkwụsị doro anya nke ụdị ntụpọ dị elu, ọ nwere ọrụ nke iwepụ ọkụ ọkụ, nke na -emepụta ebe nchekwa dị mma maka usoro mmezi na akụrụngwa, ma na-eme ka echiche nke nchekwa nke ndị ọrụ mmezi. nkesa transformer, ọ ga-eji dị ka isi nchebe nke nkesa transformer, n'ihi ya, ọ na-ewu ewu na 10kV nkesa akara na nkesa transformer.
Echichi nke dobe-ụdị fuuz:
(1) n'oge echichi, agbazere kwesịrị ịgbatị (nke mere na agbaze ahụ gbasara 24.5N esemokwu), ma ọ bụghị na ọ dị mfe ime ka ntutu dị ọkụ.
(2) na fuuz ahụ ga-abụ nke ọma na ntụkwasị obi arụnyere na crossarm (etiti) na-enweghị ihe ịma jijiji ma ọ bụ ịma jijiji
(3) ọkpọ a wụrụ awụ kwesịrị inwe ihu ala nke 25 Celsius ± 2 Celsius, nke mere na ọkpọkọ ahụ a wụrụ awụ nwere ike ịda ngwa ngwa site na ịdị arọ nke onwe ya mgbe agbazere agbaze.
(4) a ga-etinye fuuz ahụ na ogwe aka na-agagharị (etiti) na anya dị anya nke na-erughị 4m site na ala. Ọ bụrụ na arụnyere n'elu nkesa na-ekesa ihe, a ga-ejigide ebe dịpụrụ adịpụ n'etiti etiti ahụ na nke kachasị na njedebe nke ihe ntụgharị ahụ karịa 0,5m, ọ bụrụ na enwere ihe ọghọm ndị ọzọ site na nkedo nke ikuku ahụ.
(5) ogologo nke fuuz ahụ ga-edozi ka a agafeghị oke larịị. Achọrọ ka ire nke ọbọgwụ duck nwere ike ijide ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ogologo kọntaktị ahụ mgbe emechiri, iji zere omume na-ezighi ezi nke ịdaba na ọrụ.
(6) gbazee eji mee ihe kwesiri ibu onodu nke ndi na emeputa ya, ma nwekwaa ike nke oma, ihe ndi mmadu choro na agbaze nwere ike iguzo ma obu ihe kariri 147N karia esemokwu.
(7) na 10kV dobe-ụdị fuuz ga-arụnyere n'èzí na interphase anya ga-adị ukwuu karịa 70cm.
Ọrụ nke ụdị ụdị mmiri:
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, anaghị ekwe ka ya rụọ ọrụ mpịakọta na ibu, naanị nye ya ohere ka ọ rụọ ọrụ akụrụngwa (akara), kaosiladị, ndị na-ekesa nkesa na ikike nwere ike erughị 200kVA na ahịrị ngalaba nke 10kV na-ekesa ahịrị na netwọk ugbo. kwere ka ha rụọ ọrụ n'okpuru ibu dị ka ihe ndị a achọrọ:
(1) mmadụ abụọ ga - arụ ọrụ ahụ (otu onye maka nlekọta na otu onye maka ime ihe), ma ọ bụrụhaala na ha ga-eyi uwe aka na-ekpuchi ihe, akpụkpọ ụkwụ na enyo anya, ma jiri mkpanaka mkpuchi ruru eru nwere ọkwa volta kwekọrọ. A machibidoro ọrụ ọrụ na ihu igwe nke àmụmà ma ọ bụ oké mmiri ozuzo.
(2) mgbe Anam Udeme breeki ọrụ, ọ na-adịkarị kwuru dọpụta etiti oge mbụ, mgbe ahụ leeward n'akụkụ adọ, na n'ikpeazụ windward n'akụkụ phase.This bụ n'ihi na nkesa transformer si atọ - adọ ọrụ abụọ - adọ ọrụ, dọpụta etiti oge nke obere arc na-ewepụta, agaghị eme ka obere oge dị n'etiti. Nke abụọ bụ imebi akụkụ nke lee lee, n'ihi na ewepụla akụkụ nke etiti, akụkụ ihu leeward na windward n'akụkụ ọhụụ dị okpukpu abụọ, ọbụlagodi na enwere ikefe ọkụ, nke na-ebute obere elekere n'etiti ihe ga-ekwe omume dị obere. N'ikpeazụ, mgbe a na-adọta usoro elu elu, naanị ike dị ugbu a na ala, ọkụ ọkụ na-akpata dị obere.
(3) mgbe a gbanwere mgba ọkụ ahụ, usoro ọrụ a na-agbanwe mgbe a gbanwere mgba ọkụ. Nke mbu, emechiri uzo elu elu, wee mechie akuku leeward, mechie uzo nke etiti.
(4) na-arụ ọrụ nke wụrụ awụ tube bụ a ugboro ugboro oru ngo. Ọ bụrụ na ị payaghị ntị na ya, ọ ga - eme ka kọntaktị ahụ gbaa ọkụ ma duga na kọntaktị ọjọọ. A ga-ekpo ọkụ na kọntaktị ahụ ma kpochapụ mmiri ahụ. breeki brik nko na ọnụ nke ọbọgwụ ka pịa ala a ugboro ole na ole, na mgbe ahụ jiri nwayọọ na-agbalị sere, chọpụta ma ọ dị mma. Failure imechi mgba ọkụ na ebe ma ọ bụ adịghị emechi ike, na static kọntaktị na fuuz mgbali bụ ezughi oke, ọ dị mfe ime ka ịkpọtụrụ kọntaktị ma ọ bụ tubụ agbaze daa
Nke gara aga: Anchor Shackle
Osote: Wepụ Fuse Cutout 36kv RW Serise
Wepu Fuuz na Poselin
Poselin fuuz Cutout
60 / 80A 1P resin Bee si fuuz Series With Black ...
Wepu Fuse Cutout 33kv 36kv (HRW-33)
Wepụ Fuse Cutout 36kv RW Serise
415V Bakelite House Service Cut Cut Out Volta dị ala
Ọla kọpa eduzi Service fuuz Series Cutout Typ ...
Henley 100Amp Fuuz ụgbọelu - Series 7 ...